सलमान खानले ज्वाइँलाई फिल्ममा डेब्यू गराउँदै, तीन वर्षसम्म किन कुराए ?
असोज २३, २०७४| प्रकाशित २०:१८
मुम्बई (एजेन्सी) – सलमान खानले अन्ततः आफ्नो ज्वाइँलाई फिल्ममा लन्च गर्ने भएका छन् । सलमानले बहिनी अर्पिताका पति आयुष शर्मालाई आफ्नै प्रोडक्सन हाउसबाट डेब्यू गराउने भएका हुन्।
आयुषको डेब्यू फिल्मको विषयमा लामो समयदेखि विभिन्न अनुमान गरिँदै आएको थियो । उनले यसका लागि तीन वर्षदेखि पर्खँदै आएका थिए । अब यो पर्खाइको घडी सकिएको छ । सलमान खान फिल्म्सको ब्यानरमा उनको पहिलो फिल्म बन्ने तय भएको छ।
फिल्मको निर्देशन अली अब्बास जफरका सहायक निर्देशक रहर काम गरिसकेका अभिराज मीनावालाले गर्नेछन् । अभिराजसँग सलमानको भेट 'सुल्तान' फिल्म निर्माणको समयमा भएको थियो।
आयुषले फिल्ममा काम गर्न लागेकोबारे सलमान खानले ट्विटरमा घोषणा गरेका छन् । उनले आयुषलाई मेन्सन गर्दै लेखेका छन्- 'धेरै बधाई ! अब निकै मिहिनेत र लगनका साथ काम गर्ने समय आएको छ । सफलताको लागि शुभकामना!'
आयुष पछिल्लो तीन वर्षदेखि आफ्नो डेब्यू फिल्मका लागि तयारीमा जुटेका थिए । ‘बजरंगी भाइजान’, ‘प्रेम रतन धन पायो’, ‘सुल्तान’ र ‘ट्युबलाइट’ को सुटिङको क्रममा उनी सलमानसँगै रहेका थिए । उनले सुटिङको सेटमा अभिनय कौशल सिक्नुका साथै नृत्य र द्वन्द्वको तालिम पनि लिएका थिए । आयुषमा निखार आएको पाएसँगै सलमानले उनलाई डेब्यूको लागि तयार रहेको ठानेर बल्ल फिल्म निर्माणको घोषणा गरेका हुन्।
डेब्यू फिल्म आउने तय भएसँगै आयुष अभिनय कार्यशालामा जान थालिसकेको बताइएको छ । फिल्मको हिरोइन भने फाइनल हुन बाँकी छ । फिल्मको सुटिङ फेब्रुअरीदेखि सुरु हुने भएको छ । फिल्ममा गुजरातको परिवेशमा आधारित प्रेमकथा प्रस्तुत हुनेछ।
सलमानले भनेका छन्, 'हो, हामी आयुषको फिल्म निर्माण गर्न लागिरहेका छौं । सुटिङ फेब्रुअरीमा सुरु भएर २०१८ को आखिरमा रिलिज हुनेछ।'
'गरुड पुराण'मा नाजिर बने ब्यान्ड मास्टर, माघ ४ देखि प्रदर्शन
नेपालकी पहिलाे नायिका भुवन चन्द अब फिल्म निर्माणमा
'समुद्र साउती' ल्याएका कवि भिखारी जब गृहनगर पुगे
विवाहपछि यस्तो देखियाे दीपिका–रणवीरकाे जाेडी
अभिनेता खनालले गरे ‘माला अार्टस् एकेडेमी’ को उद्घाटन
सवारी दुर्घटनामा अभिनेता विपीन कार्की, रोकियो 'जात्रै जात्रा'को छायांकन
सर्वोच्च अदातलले दियो भन्सारका पूर्वनासु चालिसेलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा उन्मुक्ति
विमल घर्तिमगरले ए डिभिजन लिगको बाँकी खेल गुमाउने
चालू आर्थिक वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुन्छ : प्राधिकरण
कोरम नपुगेपछि विकास समितिको बैठक स्थगित
द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि विशेष अदालत गठन गर्न नेता लेखकको माग
एडिबीद्वारा ३९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको आर्थिक सहायता उपलब्ध
नेपालमा लगानी गर्न जापानको निजी क्षेत्रलाई परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह
बिगार्ने नेता, दोष कर्मचारीको थाप्लोमा?
प्रकाश नहुँदा प्रचण्ड परिवारको एक वर्ष
एकादशी मेलामा 'ग्याङ फाइट', छुट्याउन गएका प्रहरीसहित दर्जनभन्दा बढी घाइते